မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းသားတွေရဲ့ အကဲဖြတ်ပုံစံကို Credit System ကျင့်သုံးနေ | MRTV-4
မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်ကစပြီး ကျောင်းသားတွေရဲ့ အကဲဖြတ်ပုံစံကို Semester အလိုက် Grade ထုတ်ပြန်ပြီး Credit System ကိုစတင်ကျင့်သုံးနေပြီဖြစ်တယ်လို့ မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်က သိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်တွေမှာကျင့်သုံးနေတဲ့ အကဲဖြတ်ပုံစံ Credit Systemကို မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာလည်း ကျင့်သုံးနေပြီဖြစ်ပြီး ကျောင်းသားတွေကို စာသင်ချိန်၊ လက်တွေ့ချိန်နဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ် မူတည်ကာ Credit သတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်တယ် လို့သိရပါတယ်။
Credit System သုံးခြင်းကြောင့် ကျောင်းသားများဟာ မိမိအရည်အသွေးကို Semester အလိုက်အကဲဖြတ်နိုင်ပြီး သင်ယူရတဲ့ဘာသာရပ်တွေကို အတိုးအလျော့ ရွေးချယ်ပြုလုပ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဘာသာရပ်တစ်ခုအပေါ်မှာ ရရှိပြီးတဲ့ Grade ကို ပိုမိုမြင့်အောင် ပြန်လည်ကြိုးစားနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေလည်းရရှိသွားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဘွဲ့ကိုလည်းကြိုးစား မှုအပေါ်မူတည်ပြီး (၅)နှစ်မပြည့်ခင် ရယူနိုင်မယ့် အားသာချက်တွေ ရှိတယ်လို့ မန္တလေးကွန်ပြူတာတက္ကသိုလ်၊ သင်တန်းရေးရာဌာန ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ဒေါက်တာဆင့်ဆင့်အောင်က ပြောပါတယ်။
မန္တလေးကွန်ပြူတာတက္ကသိုလ်မှာ အထူးပြုဘာသာရပ်(၆)ခု သင်ကြားပေးနေပြီး အောင်မြင်ပြီးမြောက်သူတွေကို B.C.Sc.(Software Engineering), B.C.Sc.(Knowledge Engineering), B.C.Sc.(Business Information Systems), B.C.Sc.(High Performance Computing),B.C.Tech.(Computer Communication and Networks), B.C.Tech.(Embedded Systems)စတဲ့ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာဘွဲ့တွေပေးအပ်ချီးမြှင့်ပေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ အဆင့်မီပါကလည်း မဟာဘွဲ့သင်တန်းနှင့် ပါရဂူဘွဲ့သင်တန်းတွေကို အဆင့်ဆင့်ဆက်လက် တက်ရောက်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်အနေနဲ့ သြစတေးလျ၊ စင်္ကာပူ၊ ဂျပန်၊ ထိုင်း စတဲ့ နိုင်ငံတွေက တက္ကသိုလ်တွေနဲ့ MOU ရေးထိုးပြီး သုတေသနအစီအစဉ်၊ သင်ကြားရေးအစီအစဉ်၊ ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်တွေကို ပူးဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်ဟာ ICT နည်းပညာတွေတိုးတက်နေသလို မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ကျောင်း သား/ကျောင်းသူအတွက် နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းမီတဲ့ သင်ယူမှု၊ Internship (အင်တန်းရှစ်) ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းခွင်အကြိုလေ့ကျင့်ပေးနိုင်မှုတွေအပြင် ပြည်တွင်းပြည်ပကုမ္ပဏီများနှင့်ဆက်သွယ်ပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရှာဖွေပေးနိုင်မှုများ ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာတက်တဲ့ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေဟာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်လမ်းကောင်းတွေရှိလာပြီ ဖြစ်တယ်လို့ ဒေါက်တာဆင့်ဆင့်အောင် ကပြောပါတယ်။မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ဟာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ ဒဟတ်တောကျေးရွာအနီးမှာတည်ရှိပါတယ်။ မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကို ၁၉၉၇ ခုနှစ် မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး နှစ်ပေါင်း ၂၀ အတွင်း ဘွဲ့ရကျောင်သားဦးရေ ၄၀၀၀ နီးပါးမွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကို ယခုနှစ်ပညာသင်နှစ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲမှာစုစုပေါင်းရမှတ်(၄၅၀)နှင့်အထက်ရရှိအောင်မြင်သူတွေလျှောက်ထားနိုင်ပြီး ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ (၂၅၀)ဦး လက်ခံပေးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။